ENGAPHAMBILI OKUPHAKAMILEYO, YAMHLANJE, KUBALULEKILEYO KWAYE KUXOLEKILEYO I-APT WIFI - I-Airbnb
ENGAPHAMBILI OKUPHAKAMILEYO, YAMHLANJE, KUBALULEKILEYO KWAYE KUXOLEKILEYO I-APT WIFI
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguChusana
Banzi kakhulu and mihla kunye lokulala mnye, negumbi elinye labantu, igumbi ophilayo kunye nekhitshi kwisakhiwo yemveli Asturian, zalungiswa ecaleni Monastery of Las Pelayas (125m), lo Cathedral (200m) kunye Gascona Street, Bulevar de la Sidra Calle Gascona (150m). I-Super central, ikhululekile, yanamhlanje, ivulekile, intle kwaye intsha.
IApartment enama-57 m² iluncedo, iphangalele embindini, kumbindi we-Oviedo. Ukwakha nge-façade ye-Asturian yendabuko, ibuyiselwe ngokupheleleyo. Iqukethe igumbi lokuhlala elinebhedi ye-sofa ephindwe kabini ye-135 cm, igumbi elineebhedi ezimbini ze-90 cm kunye noomatrasi bememori ye-foam (ukongeza, ngenxa yokuba igumbi likhulu, imimiselo yeNqununu ye-Asturias ivumela. ukuba ibandakanye umandlalo supplementary) ikhitshi, igumbi ngokupheleleyo Hall yokugcina .... bonke banzi kakhulu. Ihonjiswe ngendlela yanamhlanje kunye nesebenzayo.
4.93 · Izimvo eziyi-223
Indlu ibekwe ngaphantsi ukuhamba imizuzu emibini ukusuka Plaza de la Catedral, nto leyo ithetha ukuba abahambi abeza kuphela nje elifutshane ngosuku ezintathu-ezimbini okanye ukubaleka, ukuba mnandi fumanisa Oviedo akukho mfuneko ke ukuba ukususa imoto. Ngesi sicwangciso sokuhamba unokuza ngebhasi okanye ngololiwe kwaye kule meko siya kukunyamekela ukukuthatha esitishini. Ejikeleze i-Plaza de la Catedral kukho yonke imisebenzi yenkcubeko, iMyuziyam yezoBugcisa obuhle kunye ne-apostile ye-El Greco, i-Archaeological Museum, iMyuziyam yeDiocesan. Izikhumbuzo zeLifa leMveli le-UNESCO, iLa Cámara Santa, iFoncalada kunye neCawa yaseSan Julián de los Pradros. Kwakhona ezinye iindawo ezinomdla ezifana neCampoamor Theatre, iPlaza de El Fontán kunye neTrascorrales kunye nommandla wezorhwebo weOviedo. Ukuhlala ixesha elide i-Oviedo inikezelwa "njengenkampu yesiseko" egqibeleleyo ekwiziko lejografi yeNqununu. Idityaniswe kakuhle kakhulu nguhola wendlela.
Umbuki zindwendwe ngu- Chusana
Inombolo yomthetho: VUT-278-AS